Olee otú mmiri na seedlings?
Iji na-eto eto seedlings siri ike, ọ dị ezigbo mkpa ịma otú e si agba ya mmiri. N'agbanyeghi na usoro ogbugba mmiri na-adi ka o di mfe, odi mkpa ka i gee nti na otutu ihe.
Kedu ka mmiri si eto mmiri n'ụzọ ziri ezi?
Ziri ezi atọ nke seedlings a rụrụ na ọtụtụ nkebi:
Ịgbara mgbe ị na-akụ mkpụrụ . Ala dị njikere maka ịkụ mkpụrụ dị mma. N'elu ya, a na-atụ mkpụrụ osisi ahụ, n'elu ha ha na-ada ụra na ala akọrọ, na-ekpuchi ụwa. Ọtụtụ ndị nwere ajụjụ: ọ dị mkpa ka mmiri na-eto eto tupu Ome? A na-atụ aro ka ịlele otú etu ala si anọgide. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a na-agbanye ya nke ọma (nke mere na elu enweghị ihe ọkpụkpụ) na obere ịgbara nwere ike. Mgbe ntuputa nke Ome, a kwụsịrị ịgbara mmiri ruo ụbọchị 2-3, nke mere na ha dị ike. Mgbe ahụ, a na-akụkọta mkpụrụ osisi ahụ na-acha akwụkwọ cotyledonous.
Ịgbara obere Ome . A na-eji nlezianya emepụta ya, ka ọ ghara imebi seedlings. A na-ehicha ụwa gburugburu osisi iji gbochie mmiri e guzobere na mgbọrọgwụ ha. A na-eme nke a ka ọrịa ahụ wee ghara ịmalite ụkwụ nwa, nke nwere ike ime mgbe ọ na-akpọtụrụ ya na nsị ya mgbe ọ si n'ala. Ọ bụrụ na a kụrụ osisi na iko, mgbe ahụ, a na-atụ aro ka mmiri mee ha na mpaghara ha, ma ọ bụrụ na a na-agbanye mmiri nke a na-etinye na mmiri.
Ịgbara nke sprouted seedlings . Mgbe osisi ahụ tolitere, mgbọrọgwụ ha na-agbakwawanye ike, a pụrụ ime mmiri site n'ịwụsa mmiri n'ime ite ahụ. Mgbọrọgwụ ga-enwe ike zuru ezu iji dọpụta mmiri si na ala.
E nwere okwu mgbe a na-akụ mkpụrụ site na iji "nkwụsị" . Na nke a novice gardeners nwere mmasị na: esi aṅa mmiri ahụ ọkụ? A na-eme ka mkpụrụ osisi si n'elu, a na-eme nke ọma nke ọma.
Mmiri maka ịkụ mkpụrụ
Mmiri, nke a na-eji mee ihe maka ịgbara mmiri, ga-abụ nke dị elu na izute ihe ndị a:
nwere ntule acid-neutral neutral;
nwere dịka o kwere mee - chlorine, arọ ọla na ndị ọzọ.
Ọtụtụ ndị na-ahọrọ iji mmiri mgbati ma ọ bụ mmiri mmiri.
Ezigbo ihe ubi na-aza ee ee ajụjụ a: ọ ga-ekwe omume iji mmiri ozuzo mee mmiri ahụ? Enwere ike na oxygen ma nwee mmeghachi omume na-anọpụ iche. Iji belata kemikal na-adaba na mmiri, onye kwesịrị ịgbaso iwu dị otú ahụ mgbe ọ na-anakọta ya:
adighi anakọta ya mgbe ogologo oge akpo;
Ị ga-echere ihe dị ka ọkara otu awa mgbe oké mmiri ozuzo dị ogologo. Mgbe nke a gasịrị, ị nwere ike ịmalite ịnakọta mmiri.
Ikwenye na iwu ndị a dị mfe ga-enyere gị aka ịkwanye seedlings.
Currant cropping ke mgbụsị akwụkwọ
Nri maka cucumbers
Tulips - mgbe igwu olulu na osisi?
Ụlọ cypress na-ehicha - gịnị ka m kwesịrị ime?
Dahlias maka oyi
Cucumbers - ọrịa, pests na akara
Ebee ka pomelo na-eto eto?
Uwe si eji emeputa 2014
Alflutop - analogues
Ebube Gloria Jeans
Cherebral ischemia na ụmụ amụrụ ọhụrụ
Kedu ka esi eme ka nwatakiri dinara na nne na nna ha?
Mel Bee na-agba di ya Stephen Belafonte
Choux mgwakota agwa maka dumplings na dumplings
Wedding na Tiffany agba
Mmega ahụ maka ọnụ ọgụgụ mara mma
MRI nke ngụgụ na bronchi
Jiri aka polka akara aka
Azu azu egwuregwu - ụdị kacha mma maka ụmụ agbọghọ
Anthurium - nlekọta ụlọ
Ọkpụkpụ nke okirikiri na nkedo